Guri dabaq ah oo kusoo dumay degmada Xamarweyne iyo khasaaro ka dhashay | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Guri dabaq ah oo kusoo dumay degmada Xamarweyne iyo khasaaro ka dhashay
Guri dabaq ah oo kusoo dumay degmada Xamarweyne iyo khasaaro ka dhashay
Guri dabaq ah oo ka koobnaa seddex biyaano, kuna yaallay degmada Xamar weyne ee gobolka Banaadir ayaa ku dumay qoysaskii ku noolaa. Kooxaha gurmadka iyo badbaadinta ayaa waxay ku howlan yihiin sidii dadka ku hoos jira burburka ay uga soo badbaadin lahayeen.
Dhowr qof oo dhaawac ah ayaa lagasoo saaray burburka hoostiisa, waxaana weli la baadi goobayaa dad badan oo ku hoos jira dhismaha dumay.
Lama oga illaa iyo hadda waxyaabaha keenay inuu guriga dumo. Laakiin waxa uu kamid yahay dhismooyinka qadiimiga ah ee ku yaallla degmada Xamar weyne. Waxaana iska leh mid kamid ah xildhibaannada Baarlamanka aqalka hoose , sida ilo lagu kalsoonyahay ay Hiiraan Online u sheegee.
Guddoomiyahii hore ee degmada Xamar weyne Cumar Shariif Jeeg oo ka hadlayay muuqaal toos ah oo uu telefashinka Universal baahiyay ayaa waxa uu ku sheegay in nabadoonka beelaha Banaadiriga uu ku jiray guriga caawa Xamar weyne kusoo dumay dadkii deganaa.
Weli si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay burburka gurigaas.